Oracle Certification - Torolalana iray manontolo - ITS Tech School
Ny Oracle dia manana akaiky ny firenena 145 ary manompo azy manokana maro amin'ny alàlan'ny famolavolana teknolojia momba ny teknolojia, fametrahana rafitra, paikady fitantanana, tranonkala sy rahona fampiharana ary fitantanana hafa misandrahaka sy mahomby. Ny Computer Multinational and Driving sy ny Information Technology Corporation dia manome vahaolana momba ny fanatanjahantena sy ny fanamarinana amin'ny fanadihadiana manerana izao tontolo izao ary manampy azy ireo haka trano sy handroso amin'ny indostrian'ny ordinatera sy ny IT.
Ny kilasin'ny Oracle sy ny Certifications dia omena amin'ny faribolana sy fizarana toy ny daty, rahona, fampiharana, fitantanana raharaham-barotra, rafitra miasa, ary fahitana eo amin'ny samy hafa. Ny fanamarinana dia mifanaraka amin'ny zavatra ataon'ny orinasa izay mandaitra amin'ny servera, ny fitehirizana, ny rafitra ary ny rafitra rahateo, ary ny hafa.
Ny Oniversite Oracle dia toerana iray amin'ny ankamaroan'ny fitadiavana aorian'ny toerana ho an'ireo olona izay miezaka manangona sehatra iray ao amin'ny Oracle mandidy ny sehatry ny indostria IT. Misy mihoatra ny 1.8 millions Oracle manamafy ireo manam-pahaizana izay manolotra ny zavatra ilaina sy ny fepetra ilaina amin'ny orinasa, orinasa ary ny hafa. Ny 93% amin'ireo mpaka sary dia mahita ny Oracle Certifications manan-danja sy manintona amin'ny resadresaka miafina izay manana fanamarinana Oracle ho toy ny fahaiza-manao voalaza ao. Ny fanamarinana Oracle rehetra dia tsy mahazo latsak'aina amin'ny fanitarana ny 7 ianao amin'ny fanonerana anao, ary ny sasany dia afaka manome toerana ambony ihany koa. Maro amin'ireo fikambanana sy fikambanana IT no miara-miasa amin'ny Oracle, ary ny fanamafisana an'i Oracle dia afaka mametraka ny toerana misy anao amin'ireo anarana goavana ao amin'ny orinasa (maro ireo fikambanana Fortune 500).
The Levels Certification
Manaova fanamarinana ny fitantanana
Ny fanamafisana ny Oracle amin'ny ambaratonga. Ireo dingana ireo dia natolotra (amin'ny fangatahana mitombo):
Oracle koa manome ny fanomanana aterineto amin'ny aterineto. Ny fanomanana ny Certifications dia manondro amin'ny Applications, Database, Enterprise Management, Industries, Java, Operating Systems sy ny hafa. Hatramin'izao raha ilaina ny fanamafisana ny singa iray na ny teknolojia iray, ny mpandahatra Oracle voamarina dia tokony handoa anao. Ankoatra ny Oracle ihany, ny fanomanana dia azo alaina ihany koa ao amin'ny Oracle voamarina ao amin'ny tranonkala ary ny fifantohana amin'ny fampiofanana.
Ny tranokala an-tserasera Oracle sy tranonkala maro samihafa dia afaka manome anao rehetra ny fitaovana fitsapana izay tsy maintsy hahatratrarana ny Certification. Ankoatra izany, dia ny fianarana sy ny kilasy an-tserasera izay manampy anao hiomana tsara amin'ny alàlan'ny sehatra intuitive. Azo atao koa ny mampiasa ireo taratasy sy fifanakalozan-kevitra amin'ny ohatra mba hifaneraserana amin'ny vondrona manam-pahaizana sy manam-pahaizana ary karazana karazana fanomanana isan-karazany. Oracle dia mirakitra ireo fitaovana fakana an-tsoratra sy fampianarana rehetra ao amin'ny pejin'ny fanamarinana mari-pahaizana, ary hatramin'izao dia afaka mianatra sy mampiasa ny harena mora foana ianao.
Araka ny voalaza teo aloha, ny mari-pamantarana Oracle dia mamaritra ny zavatra manokana. Ny fikambanana dia nanolotra ny fandaharam-pampianarana mitadidy ny tanjona farany hamoronana mpiasa manana talenta izay manana fahaizana amin'ny fitantanana vahaolana teknolojika izay ataony. Azontsika atao ny manamarina ny mari-pahaizana Oracle amin'ny faritra, anisan'izany:
Ny ampahan'ny Oracle Certifications dia tsy ampiasaina, izay midika fa tsy misy mpangataka ao anatin'ny fanadinana Certification. Ity sarany $ 125 ity. Ny mari-pahaizana Oracle natolotr'izy ireo dia nahalafo ny $ 250, ary raha mila antoka ianao amin'ny alalan'ireto, dia takiana ianao haka ny fanadinana ao amin'ny Oracle miantoka antoka na ny Pearson VUE, ny tranonkalan'ny Oracle.
Manadihady ny kilasin'ny fanamarinana Oracle manaraka.
Misy manodidina ny 80 samihafa fivoriana sy zavatra ao ambanin'ny "Certification" class class des training de Oracle. Ireo dia ahitana ny Agile, Siebel, Hyperion, Demantra, Primavera, E-business suite, GRC sy JD Edwards Enterprise One. Misy eo amin'ny 60 ny mari-pahaizana manokana ao amin'io sokajy io ary ireo singa ireo dia mamaritra amin'ny fanadihadiana, miezaka ny manamboatra, manatanteraka asa, mifandamina, rindrambaiko ary faritra hafa azo ampiharina sy tsy maintsy ilaina.
Ny kilasin'ny Oracle Cloud Certification dia mampiditra ireo mari-pandaminana izay mamaritra ny Oracle sy ny rahona java. Ny mari-pahaizana momba ny mari-pahaizana dia nanamora ny Associate sy Professional tamin'ny andaniny. Ireo Fanamarinana ireo dia manampy amin'ny endrika ivelany amin'ny fomba fampiasana ny Cloud ary manao fanentanana tahaka ny famonoana, famindrana, fanatsarana ary ny hafa. Ny fanamafisana dia mamaritra ny rahona rahateo, ny dingana, ny programa ary manampy amin'ny fifandraisana ara-barotra toy ny fanangonana, ny HR, ary ny ERP miaraka amin'ny hafa.
Raha toa ka mila mandray ny fampahalalana sy ny fahaiza-manao amin'ny fampiasana sy ny famonoana ny tahiry Oracle ianao, dia tokony ho fanapahan-kevitrao ireo fanamarinana ireo. Oracle dia manome mihoatra noho ny 40 databases izay mampiato sy manatsara ny fiarovana ary manamaivana ny fandaniana IT ary manome tombontsoa maro samihafa izay tsy azon'ny mpanohitra. Ireo kilasy ankapobeny izay anolorana ny Certification dia misy ny "My SQL" sy ny "Fampandrosoana fampiharana Database" miaraka amin'ny hafa.
Ny fanomezan-dàlana dia omena amin'ny ambaratonga tahaka izany koa ny mpiara-miasa, mahay, ace, tompony ary pro.
RAY: Ny certificat de l'OCA dia ireo izay mampianatra ny fahaiza-mitantana ny rafitra manara-maso ny tahiry. Azonao atao ny mijery ny Certification 12C SQL, ny Six 12C SQL, ny 11g SQL, ary ny SQL master Certification.
OCP: Ireo fanamarinana ireo dia natao hamporisihana ny fahaiza-manao maromaro mifandraika amin'ny tahiry amin'ny kandidà. Ho an'ny fanatontosana ny Fanamarinana dia tsy maintsy mahavita ny fanomanana sy ny fandaharam-potoana ianao ary mandalo ny fanadinana Oracle izay mamaritra ny rakitra 12C.
OCM: Ny Level Certification dia manana ny mari-pahaizana momba ny talen'ny talen'ny fitantanam-panjakana ho toy ny fepetra ara-drariny. Ny fanomezan-dàlana dia mamaritra ny rakitra 12C. Tokony hifanatrika ny fanadinana fanavaozana ace ary tokony hiaina lanonana roa, amin'ny andrana samihafa mitadidy ny tanjona farany hahatratrarana ny Fanamarinana.
Oče: Ny mari-pankasitrahana Oracle Certified Expert dia ahitana ny mpiandraikitra mpanara-maso ny fanaraha-maso, ny fidiram-bola faran'izay haingana indrindra, ny fitantanana ny fanatanterahana, ny talen'ny Grid-framework ary ny fahaiza-manaon'ny fitantanana sy ny mari-pahaizana.
Raha mila ny marina ianao ary mandalo ny fandraisana anjara amin'ny vahaolana fitadiavam-pahefana, dia izao no fanamarinana horaisina. Ny fandaharanasam-pitantanana mivantana eo amin'ny fiainana andavan'andro dia manampy ny manam-pahaizana hampiditra sy hifampiraharaha amin'ny zavamiaina sy ny angon-drakitra fantatra amin'ny tetik'asa iray. Ny fanomanana ao anatin'io sokajy io dia ahitanao ny valin'ny fitsapana fanandramana Oracle, ny talen'ny orinasa Oracle, ary ny orinasa Oracle izay mifantoka amin'ny lehiben'ny Ops. Ny fanamarinana izay misy ao amin'ity sokajy ity dia:
Oracle dia mandroso mari-pankasitrahana: Ao anatin'io sokajy manokana io ihany no ahazoan-dàlana 25 tsy manam-paharoa izay mifantoka amin'ny fiarovana, ny fitantanana ny serivisy, ny fifampiraharahana, ny adidy, ny varotra ary ny mpividy hafa sy ny orinasa mpanome tolotra. Ireo dia mari-pahaizana manokana sy manamafy ny fahaiza-manao fantatra amin'ny fampiasana ny teknolojia Oracle ho an'ny orinasa sy fikambanana manokana.
Oracle Foundation Certification: Ity fahazoan-dàlana ity dia mahatsiaro anao ho manam-pahaizana IT izay afaka mandrindra, manoritra sy manatanteraka ny vahaolana Oracle sy ny IT. Ara-drariny ho an'ny tale mpitantana, ny Sertifika dia manome fahafahana anao hanatanteraka ny orinasa rehetra ao Oracle, ary koa manome anao ny fomba fitantanana ny fitantanana ny vondrona. Ny fanamarinana azonao atao dia mampiditra ny manam-pahaizana manokana momba ny famolavolana IT sy ny fitantanana ny fampiasam-bola amin'ny fiainana andavanandro.
Oracle java sy Middleware Sertifika: Oracle fandrosoana eo amin'ny sehatra dia mampifanaraka ny fandrindrana sy ny fampiharana Cloud, ny tsindrona fandraharahana, ny java, ary ny fampitomboana ny fitaovana, ny fampiasana ny karazana, ary ny hafa. Ny fanamarinana izay manome anao amin'ny fahaiza-miaina mifanaraka amin'ireo fandrosoana ireo dia misaraka amin'ny sokajy isan-karazany, izay mandalo ireo mari-pahaizana rehetra, anisan'izany ny mpiara-miasa, mahay sy tompon'andraikitra amin'ny hafa. Ny loham-pifandraisana dia mampiditra ny java software engineer, java designer, framework planner, head framework and others.
Ny rafitra miasa ao Oracle Ireo mari-pahaizana mamaritra ny Solaris sy ny fiarovana, ary ny Administration Linux. Afaka misafidy mari-pahaizana momba ny loha laharana ambony, ny traikefa niainana, ary ny taranja fianarana. Ny rafitra miasa ao Oracle dia ao anatin'ny fangatahana goavana manoloana ny raharaham-barotra eo amin'ny sehatry ny orinasa satria ny vola dia ambany dia ambany ary manolotra faharetana sy fiarovana mahavariana. Eto dia ho hitanao ny fiampangana an-tserasera, ny fitantanana ny aterineto, ny tambajotra ary ny lanitra no fetra avy any! Ireo tompon'andraikitra sy tompon'andraikitra amin'ny famonoana dia hahita ireo Fahazoan-dàlana ireo manampy.
Ny mari-pamantarana fantatra amin'ny Linux dia OCP sy OCA rafitra administrator. Certifications, sy ny Certification Authority Linux 6. Ny fahefana fanamarinana dia ny solontenan'ny Oracle ihany.
Anisan'ny Solaris Certifications ny OCP sy ny mpitantana OCA. Certifications. Ny mari-pahaizana momba ny PRO projet dia ny fampiasana ny mari-pamantarana fananganana sy fampifanarahana.
Ireo traikefa Oracle OU dia afaka manampy anao hiomana amin'ny fahaiza-manao Virtualization ary hanampy anao haka ny mari-pahaizana Virtualization Oracle. Ny rafitra fizarazarana virtualization dia santionan'ny datacenter ary manampy amin'ny fitantanana ny fananana amin'ny alàlan'ny fandrindrana. Ny fanatontosana ny servers dia manampy amin'ny fampihenana ny fandaniana ara-tsosialy sy ny fanatsarana ny fitantanana ny angon-drakitra.
Ny mari-pahaizana momba ny pro-karena eto dia ny manam-pahaizana momba ny famonoana ny tranokala. Ampifandraisina amin'ny zavatra vita amin'ny masoandro sy ny tontolon'ny virtoaly izy io. Ny fampiasana ny VM 3 pro Certifications dia mari-pahaizana momba ny zana-pifandraisana.